သင်ဒီမှာပါ: Home / သန့်ရှင်းရေး Solutions / ကင်ညာခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်သောအောင်မြင်သောအိမ်သာ franchise! စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်?
ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသိပ်အများကြီးနိုင်ငံများရှိအများပြည်သူအိမ်သာများအတွက် "စံ" option ကိုဖြစ်ပါတယ်
ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအိမ်သာနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောခက်ခဲအချက်အလက်များနှင့်အတူဤနေရာတွင်စတင်သည်ကြစို့: 2.6 ဘီလီယံကိုလူတွေလုံလောက်တဲ့သန့်ရှင်းရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ရရှိလာတဲ့ရောဂါ & ရေညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းမရှိ 1.7 သန်းသေဆုံးမှု & အလုပ်သမားထုတ်လုပ်မှုအတွက် $ 84 ဘီလီယံအထိနှစ်စဉ်ဆုံးရှုံး။ သင်ဤစိန်ခေါ်မှု unlesss ဖြေရှင်းရန်န့်အသတ်ရန်ပုံငွေများလိုအပ်မယ်လို့ ... သင် Sanergy ကိုသုံးပါ အိမ်သာဂိမ်းအယူအဆ.
ကမ္ဘာတဝှမ်းအိမ်သာမရှိခြင်းဖို့ Sanergy ရဲ့အဖြေကိုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ငါ့စိတ်ကိုမသံသယရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ရိုးရှင်းသော! ဒါဟာ concept တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရုံအဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး! ကိုယ့်အဖြေတစ်ခုနှင့်အတူ, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးရန်ပုံငွေများရှိပါတယ်အိမ်သာဆောက်လော့။ ရန်ပုံငွေအဘယ်သူမျှမပို, မပိုအိမ်သာဆောက်ဖြေရှင်းချက်ပြိုလဲသွားပြီ!
က Win-Win ကြောင့်ဒီဂိမ်းပုံစံနှင့်အတူ, ကအောင်မြင်ဖို့ "ပျက်စီးခြင်း" ဖြစ်ပါတယ် စနစ်တကျ လူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွအေနေ ... လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ဒါဟာအာမခံစပါးရိတ်ရာကာလနှင့်အတူစိုက်သောမျိုးစေ့သည်။ အဆိုပါဂိမ်း၏ပိုင်ရှင်ငွေရှာနှင့်ပိုပြီးအိမ်သာဆောက်လော့။ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့ကိုအသုံးပြုပေးဆောင်ပေမယ့်ဘေးကင်းခြင်းနှင့်သန့်စင်သည်။ ထိုအခါဝေးအဆုံးမှာ humanure ပြန်လည်အသုံးပြုနေပါသည်! အဆိုပါကွင်းဆက်အပိတ်နေပါသည်!
2 စိန်ခေါ်မှု - စျေးပေါ & ရေရှည်တည်တံ့သောပြည်သူ့အိမ်သာစနစ် Find
3 ဖြေရှင်းချက် - အ Sanergy franchise မော်ဒယ်
4 ကိုးကား - ထို franchise Sanergy ပြည်သူ့ဆွေးအိမ်သာ
အိမ်သာသန်းပေါင်းများစွာအခုအချိန်မှာ built ခံရဖို့လိုအပ်
စိန်ခေါ်မှု - စျေးပေါ & ရေရှည်တည်တံ့သောပြည်သူ့အိမ်သာစနစ် Find
စနစ်ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်နှင့်လူမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကိုယ်နှိုက် adapts ရမယ်
ဖြေရှင်းချက် - အ Sanergy franchise မော်ဒယ်
Sanergy ကနေအများကြီးအများကြီးပိုကောင်း Eco အများပြည်သူအိမ်သာစနစ်က!
အိမ်သာဂိမ်း၏ပိုင်ရှင်သူ / သူမ၏နယ်မြေချဲ့ထွင်ပိုပြီးအိမ်သာတည်ဆောက်
ကိုးကား - ထို franchise Sanergy ပြည်သူ့ဆွေးအိမ်သာ
ကျဘျဆိုကျရေးအဖှဲ့ - Sanergy
Where The Idea All Started – ကာကွယ်ဆေးရောဂါ, MIT မှကျောင်းသားများသည်-အမြတ်အိမ်သာ franchise Create
Sanergy စွန့်ပစ်ရန် Biogas Startup စာမျက်နှာသန့်ပြီးတော့စွမ်းအင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့် –
Sanergy: အာဖရိကမှာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့စွန့်ပစ် Turn ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းတစ်ဦးက Startup စာမျက်နှာ
Sanergy "ရွှေထဲသို့ Shit Turn မှ USAID ကယ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဆန်းသစ်တီထွင်မှု Ventures ကနေ $ 100K ချီးမြှင်ခံရရန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los jóvenes emprendedores Que convirtieron "la mierda en Oro"
Up ကိုပျော်စေ: ဒါဝိဒ်သည် Auerbach ရဲ့ Sanergy
ဖိလစ်ပိုင်ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်, တစ်ဦးက Bottle သခုနှစ်တွင်ရိုက်ကူးခြင်းအလင်းထဲမှာ
ဗီဒီယိုကို - တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံများမှာတော့အဆိုပါပြည်သူ့အိမ်သာစနစ်၏အခြေအနေသည်လည်းအဆိုပါ Amazing Sanergy franchise ရေရှည်တည်တံ့သောဖြေရှင်းချက်
Sanergy ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် မှ Ani Vallabhaneni on Vimeo.